> Resource> iPhone> Top Ụzọ ndabere gị iPhone Tupu Jailbreak iOS 7
Ọ nọwo na ọtụtụ ọnwa na Apple ọrụ na-atụ anya maka untethered jailbreak maka iOS 7. Ndien ke akpatre, ọ bụ ebe a - ozize 7. ozize otu ka a tọhapụrụ ndị untethered jaijlbeak maka iOS 7. Ọ na-arụ ọrụ maka ihe ọ bụla iPhone, iPod aka, iPad na-agba ọsọ iOS 7 na mgbe e mesịrị. Na ọ na-ewe onye ọrụ 5 nkeji nga agbaji ihe Apple ngwaọrụ. Ị nwere ike ibudata ozize 7 na-eso video nkuzi maka otú nga agbaji gị iPhone.
Otú ọ dị, tupu ị nga agbaji gị iOS 7 ngwaọrụ, ị ga ndabere ya dị nnọọ ka ihe ozize otu kwuru "Biko mee nkwado ndabere nke ngwaọrụ gị tupu gị n'itinye jailbreak. Anyị na-adịghị eche ebe ga-nsogbu ọ bụla, ma anyị nwere ike 't eme ka ọ bụla di. " Ichekwa ndabere ihe iOS 7 ngwaọrụ bụ ezigbo mfe, gịnị mere n'ihe ize ndụ gị data. N'okpuru ebe a bụ n'elu ụzọ na-ndabere gị Apple ngwaọrụ tupu jailbreak.
# 1. Ndabere iPhone data na iCould tupu jailbreak maka iOS 7
# 2. ndabere iPhone data na iTunes tupu jailbreak maka iOS 7
# 3. ndabere iPhone media faịlụ (music, video, photos) tupu iOS 7 jailbreak
Cheta na: All n'elu kwuru banyere ụzọ ndị irè maka ihe ọ bụla iPhone, iPad, na iPod zọsara na-agba ọsọ iOS 7 na mgbe e mesịrị. Lee, m na-iPhone dị ka ihe atụ na-agwa gị otú e si eme ya.
# 1. Ndabere iPhone data na iCloud tupu jailbreak maka iOS 7
iCloud nwere ike ịbụ otu n'ime ụzọ kasị mma ndabere gị iPhone ma ọ bụrụ na ị na-achọghị iji eriri USB jikọọ gị iPhone ma na Wi-Fi. Iji ndabere gị iPhone data on iCloud tupu jailbreak maka iOS 7, ị kwesịrị ị na-eso nzọụkwụ n'okpuru:
Jikọọ gị iPhone na a Wi-Fi: ịpị Ntọala> iCloud. Chọta Nchekwa & ndabere na ala na pịa ya.
Kwado ndị iCloud ndabere nhọrọ. Mgbe nzọụkwụ 1, ị pụrụ ịhụ a ozi "Your iPhone agaghịzi ndabere gị na kọmputa na-akpaghị aka mgbe ị na-mmekọrịta na iTunes". Pịa "OK" na ehichapụkwa ndabere Ugbu a Gbanye.
Ọ bụ ya! Mgbe akwado gị iPhone, ị ga na-eche free n'ụlọ nga agbaji ya. Ọ bụrụ na e nwere nsogbu ọ bụla, i nwere ike iweghachi gị iPhone na iCloud ndabere na ị na mere.
iTunes bụ ndabere na kasị mma na ngwá ọrụ iPhone. E wezụga eji ya dị a transfer ngwá ọrụ, ị nwere ike iji ya ndabere gị iPhone dị ka mma. Na ọ na-ewe obere oge ndabere gị iPhone na iTunes tupu nga agbasa maka iOS 7.
Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na eriri USB. Na-eme ka n'aka gị iPhone na-egosi na iTunes.
Pịa View> Gosi sidebar. Na mgbe ahụ ị na-enwe ike ịhụ gị iPhone na egosiri n'okpuru Ngwaọrụ na n'aka ekpe nke iTunes Ohere.
Pịa Summary taabụ na isi window nke iTunes. Na mgbe ahụ ị na-kwesŽrŽ ịhụ gị iPhone bụ isi Ama. Pịa "Nke a Ccomputer" (A zuru ndabere gị iPhone ga-echekwara na nke a na kọmputa) na "Back Up ugbu a."
Nke a bụ otú ndabere gị iPhone na kọmputa gị tupu ị na-ebu si na jailbreak n'ihi na gị iPhone. M na-eche otú a bụ ihe adaba, mgbe nile, ị ga-jikọọ gị iPhone ma na-eme n'ụlọ nga na-agbasa ihe na kọmputa gị.
Ma iTunes na iCloud enyere nkwado ndabere na mpaghara bụ isi iPhone data, dị ka ntọala, mgbidi akwụkwọ, kọntaktị, Kalinda akaụntụ, faịlụ na igwefoto Roll, ngwa ọdịnala, wdg Ma iTunes Store zụrụ ihe, i nwere ike redownload ha. Otú ọ dị, songs dọwara si CD, videos ibudatara na Ịntanetị, na photos synced site na kọmputa gị ga-ehichapụ-akpaghị aka. Ọ bụrụ na ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara a niile media faịlụ gị iPhone tupu jailbreak, na-agụ n'okpuru.
Ebe ọ bụ na Apple adịghị nyere a ngwá ọrụ iji nweta ihe si iPhone ka iTunes ma ọ bụ a na kọmputa, ebe a a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ dị mkpa. M ike ikwu na Wondershare TunesGo. Ọ na-enyere gị aka idetuo niile music si iPhone na gị na iTunes Library na otu click. Na ọ bụ ike mbupụ họrọ songs, videos, photos iTunes U, pọdkastị, audiobooks, wdg si gị iPhone gị na kọmputa. Na ihe dị mma, mgbe jailbreak nke iOS 7, i nwere ike iji ngwá ọrụ a idetuo songs, videos, foto site na kọmputa gị na gị na iPhone enweghị iTune syncing.
Download Wondershare TunesGo maka Windows ma ọ bụ Wondershare TunesGo Mac version inwe a na-agbalị!
Ẹkedori TunesGo na kọmputa gị. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa.
Site Controal Panel maka Music, Movies, Photos, Ndetuta egwu ọkpụkpọ, wdg, na ị na-enwe ike mbupụ ọ bụla họrọ faịlụ site na iPhone ka iTunes Library ma ọ bụ kọmputa. The "Smart Mbupụ na iTunes" ga-foneelu si na songs adị na gị iTunes, naanị nyefee ndị a ị chọrọ ka gị na iTunes Library. Ọ dịghị oyiri ga site.